Ungaya kuphi eholidini eSpain: Izindawo ezinhlanu ezweni lethu | Izindaba Zokuhamba
Ungaya kuphi eholidini eSpain?
Luis Martinez | 01/10/2021 11:30 | Izindawo zokuvakasha, España
Impendulo yombuzo kuphi ukuya eholidini eSpain iningi. Lokho wukuthi, ayivumi impendulo eyodwa. Izwe lethu ligcwele izindawo ezinhle ongajabulela kuzo izinsuku ezithile zokuphumula ezinhle. Ukusuka enyakatho ngemvelo yayo eluhlaza, amabhishi ayo amangelengele nokudla kwayo okumnandi eningizimu nesimo sezulu sayo esithandekayo, injabulo yabantu bayo namabhishi anesihlabathi abanzi, lonke elaseSpain kufanele ukuvakashelwa.
Futhi konke lokhu ngaphandle kokusho umlando I-Castilla y I-Aragón, libalele Valencia (lapha sikushiya i-athikili ekhuluma ngalo muzi) noma ubunye Isi-Catalonia. Kodwa-ke, sizoncoma izindawo ezinhlanu zokuya eholidini eSpain.
1 Izindawo ezinhlanu ezihlukile zokuchitha iholide elingenakulibaleka
1.1 ISan Sebastián nogu lwaseBasque
1.1.1 Ugu lwe-basque
1.2 ICórdoba namadolobha ayo, phakathi kwezindawo ezibalulekile zokuchitha iholide elihle
1.2.1 Amadolobha aseCórdoba
1.3 IMurcia engaziwa, enye indawo yokuya eholidini eSpain
1.4 IRodrigo City
1.5 Amadolobha aseSoria
Izindawo ezinhlanu ezihlukile zokuchitha iholide elingenakulibaleka
Kukho konke esikutshele khona, sizokwenza umzamo wokuqala wokuncoma izindawo ezinhlanu lapho ungajabulela khona izinto ongasoze wazilibala. amaholide eSpain. Sizoqinisekisa ukuthi bavela kuwo wonke amagumbi ezwe lethu nokuthi bamelele ngokusemandleni ngokuhlukahluka kwalo okunothile.
ISan Sebastián nogu lwaseBasque
Sizoqala izincomo zethu nenyakatho yeSpain. Singakutshela ngesikhumbuzo esikhulu Santander, kusukela komlando Asturias noma kokuyigugu Amachibi aseGalician. Kepha sakhetha inhlokodolobha ye I-Guipúzcoa ngoba, ngombono wethu, ingelinye lamadolobha amahle kakhulu eSpain.
Akukona nje ukuqondana kwezinto ukuthi kube ngesinye sezindawo zamaholide ezivakashelwa kakhulu kuwo wonke umlando wethu. Okuyigugu ILa Concha bay, nolwandle lwayo, kwakuyindawo yokugeza ngisho neyasebukhosini futhi izakhiwo zayo eziningi zisabela kulobukhazikhazi obungokomlando.
Ungaqala ukuvakashela kwakho eSan Sebastián nge ingxenye endala, netheku lalo lokudoba nemigwaqo yalo emincane eboshwe ngamatshe egcwele izindawo zokucima ukoma lapho unganambitha khona abadumile pintxos. Sikweluleka futhi ukuthi uvakashele isonto elihlaba umxhwele iBaroque laseSanta María del Coro kanye nesonto lamaGoth laseSan Vicente. Uzothola kule ndawo iminyuziyamu yaseSan Telmo, kumlando waseBasque, naseNaval. Futhi, ungakhohlwa ukukhuphukela kufayela le- intaba i-Urgull, lapho ungabonga khona ukubukwa okungajwayelekile kwebheyi.
Kodwa-ke, mhlawumbe edume kakhulu enye intaba ekugcineni okuphambene kweLa Concha. Sikhuluma nawe mayelana intaba i-Igueldo, lapho, ngaphezu kwe-landscape, unepaki lokuzijabulisa ngesitayela belle epoque nge-roller coaster ekhathazayo. Ukufika lapho, ungasebenzisa i-funicular yakudala, ebisebenza kusukela ngo-1912.
Ekugcineni, kufanele ubone ucingo eSan Sebastián indawo yothando, ehambisana nendawo yokwandiswa kwedolobha futhi efaka izakhiwo kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX leminyaka njengesakhiwo esidala saseGran Casino, iVictoria Eugenia Theatre noma iMaría Cristina Hotel. Kodwa-ke, mhlawumbe ukwakhiwa okuyizimpawu kakhulu kwale ngxenye yedolobha yi I-Good Shepherd cathedral, eyakhiwa ngo-1897 kulandela imigomo ye-neo-Gothic.
Kepha izimangaliso zokukunikeza iholide eGuipúzcoa akugcini eSan Sebastián. Sikukwazisa ukuthi uvakashele amadolobha aseduze nogu lwaseBasque. Futhi ngaphezu kwakho konke, Hernani, Isikhungo saso esingumlando siyiSayithi Lenzalo Yesiko; Azcoitia, enezakhiwo eziningi ezinkulu ezinjengezindlu zayo zombhoshongo; I-Hondarribia, enezindonga zayo ezinhle noma amadolobhana amancane okudoba njenge UGetaria lapho uzothola khona amabhishi amahle.
ICórdoba namadolobha ayo, phakathi kwezindawo ezibalulekile zokuchitha iholide elihle
Uma uzibuza ukuthi ungaya kuphi eholidini eSpain, manje sizokutshela ngendawo okufanele uvakashele kuyo okungenani kanye empilweni yakho. Sibhekisa eCórdoba eyingqophamlando, nesiko lalo likaCaliphate nezikhumbuzo zalo ezinhle. Akukona nje ukuqondana kwezinto ngoba kungumuzi oneziqu eziningi ze- Amagugu Omhlaba wezwe.
Eyasungulwa amaRoma ngekhulu lesi-XNUMX BC, iCórdoba inezikhumbuzo eziningi ezivela kuzo zonke izinkathi, yize yayiphila esikhathini sayo sobukhosi ngaphansi kokubusa kwamaSulumane, ngenkathi iyinhloko-dolobha yeCaliphate.
Itiyetha laseRoma, ibhuloho nethempeli, phakathi kokunye ukwakhiwa, kungokwesikhathi sesiLatini. Kepha uphawu olukhulu lomuzi yilolo oludumile Mosque, eyakhiwa ngekhulu lesi-XNUMX ezinsaleleni zesonto elidala lamaVisigoth. Ngokwalo, kungaba yisizathu esanele ukuthi uvakashele eCórdoba.
Ngisho nanamuhla kungokwesithathu ngobukhulu emhlabeni ngemuva kweMecca kanye nomosque wase-Istanbul, yize manje kuyisonto lesonto lamaKatolika. Phakathi kwalokho ongabona kuyo kukhona iPatio de los Naranjos, umbhoshongo wensimbi we-Renaissance, iminyango eminingi efana nePostigo del Palacio noma iSanta Catalina negumbi elidumile le-hypostyle. Kepha futhi nekwaya, i-altarpiece eyinhloko noma okumangazayo macsura.
Njengoba kungenzeka uqagele, iMosque ayisona ukuphela kwesikhumbuzo senkathi yamaSulumane ongasibona eCórdoba. Izigayo zeGuadalquivir noma amabhavu weCaliphate nawo angawo. Kepha okubaluleke kakhulu ukuphoqa UMedina Azahara.
Kutholakala cishe amakhilomitha ayisishiyagalombili ukusuka eCórdoba, phansi kwe Sierra Morena, yidolobha lasendulo le-palatine elakhiwa yi-caliph U-Abderramán III. Naphezu kobudala bayo, igcinwe kahle kakhulu. Phakathi kwezimangaliso ongabona kuyo iGreat Portico, ibhilidi eliphezulu lesonto, iRich Room noma indlu kaJafar.
Ukubukwa kwe-Almodóvar del Río
Njengoba useCórdoba, sikucebisa ukuthi uvakashele futhi amadolobha afana ne IMontilla, nezinsalela zesigodlo sayo esidala; Umsindo, nezinsalela zayo zama-Arabhu, futhi UPriego, nomakhelwane bayo iLa Villa neBalcony yayo yaseAdarve. Kodwa futhi Baena, nezinsalela zalo zemivubukulo; AmaZuheros, lapho kutholakala khona uMgede Wezilwane; I-Almodóvar del Río, nesonto lawo lekhulu le-XNUMX, futhi I-Hornachuelos, nesigodlo sayo nezingadi zaseMoratalla, ezaziwa ngokuthi «I-Versailles yaseCórdoba».
IMurcia engaziwa, enye indawo yokuya eholidini eSpain
I-Murcia (calle Trapería), indawo enhle yokuya eholidini eSpain
IMurcia ayibalwa phakathi kwezindawo eziheha kakhulu ezweni lethu. Noma kunjalo, kunokuningi ukukunikeza. Futhi asikhulumi nje ngamabhishi alo amahle, ikakhulukazi lawo atholakala endaweni eseduze ne- I-La Manga del Mar Menor, noma ngesimo sezulu esifudumele nesimnandi.
Inhloko-dolobha yesifundazwe uqobo lwayo ineqoqo lezikhumbuzo ezinomona. Idolobha lakhona elidala, elizungeze i- UKhadinali Belluga Square, inentshisekelo enkulu. Kukhona ifayela le- i-cathedral yesanta maria, ehlanganisa i-Gothic, Renaissance futhi, ngaphezu kwakho konke, izitayela zeBaroque. Ngaphezu kwalokho, umbhoshongo wensimbi obabazekayo, ongamamitha angama-93 ukuphakama, uwuphawu lwedolobha.
Eduze kwethempeli elikhulu, kukhona elidala Isemina enkulu yaseSan Fulgencio futhi i Isigodlo se-Episcopal, kokubili kusukela ngekhulu le-XNUMX. Kepha kufanele futhi uhambehamba emigwaqweni yabahamba ngezinyawo yesikhungo, njenge i-Silverware ne-Trapería. Kokuqala, ungabona izakhiwo eziningi zesimanjemanje ezifana nesitolo esidala saseLa Alegría de la Huerta, kanti kwesesibili, i-Almodóvar Palace neGran Casino kugqamile.
Ngakolunye uhlangothi, esinye sezakhiwo ezifanele kakhulu eMurcia yi Isigodlo saseSanta Clara la Real, ngaphakathi kwayo, ngaphezu kwalokho, kukhona izinsalela ze- Alcázar Landela, isigodlo sama-Arab kusukela ngekhulu leshumi nantathu, futhi lokho kukunikeza umnyuziyamu wobuciko obungcwele nobase-Andalusi.
Ngamafuphi, sikweluleka nokuthi ubone edolobheni laseSegura its izigodlo zesimanjemanje nezakhiwo. Phakathi kwabokuqala, abomndeni kaPérez-Calvillo, uVinader, Fontes no-Almudí. Futhi, maqondana nalezi zakamuva, izindlu iDíaz-Cassou, Almansa, Guillamón neMercado de Verónicas.
UMkhandlu Wedolobha laseCiudad Rodrigo
Sikutshele ngezindawo ongaya kuzo eholidini eSpain ezisenyakatho, eningizimu nasempumalanga. Manje sizokwenza kusuka edolobheni elihle elisentshonalanga. Sibhekisa kuCiudad Rodrigo, konke kumenyezelwe Indawo Yomlando Yezobuciko.
Ngeke umangazwe ukuqashelwa uma sikutshela ukuthi ifa laso elikhulu liqala lodwa izindunduma, ezisalondolozwe cishe azisekho nanamuhla. Kakade ngaphakathi komuzi, unezimangaliso ezinjengaye isigodlo sikaHenry II, eyabhalwa ngekhulu leshumi nane; i Iholide laseDolobheni, Isitayela se-Renaissance, noma i- Isibhedlela Sokukhathazeka.
Kepha futhi ineCiudad Rodrigo enokwakhiwa kwezenkolo okubalulekile. Kugqame kuwo i-cathedral yesanta maria, Umsebenzi wamaRoma wokudlulela eGothic futhi i-Main Chapel enezingqimba ezibukekayo zaseSpain-Flemish. Kufanele futhi uvakashele amasonto aseSan Andrés naseSan Cristóbal kanye nokuhle kakhulu ISahluko seCerralbo, Isitayela sikaHerreriano, kanye nesigodlo seSan Agustín neSeminary yaseSan Cayetano.
Ekugcineni, ngokubuyela ekwakhiweni kwezakhiwo zomphakathi, sincoma futhi ukuthi uvakashele izindlu zaseVázquez naseCadena nezigodlo zeMashiioness yaseCartago kanye ne-ilaguila eseCiudad Rodrigo.
Manje sesihambela izindawo ezisemaphandleni zaseSpain ukuyophakamisa uhambo lokudlula emadolobheni aseSoria, amanye awo aphakathi kwamazwe amahle kakhulu ezweni. Sikhuluma nawe ngamadolobha afana IBurgo de Osma, ngeCathedral yalo ebabazekayo yaseSanta María de la Asunción, iSibhedlela sayo esidala saseSan Agustín nenqaba yaso, okusasele izinsalela zayo.
Kepha futhi sibhekisa emadolobheni afana I-Catalañazor, egcina yonke intelezi yayo yangenkathi ephakathi; IMedinaceli, nesigodlo sayo, isigodlo sayo sasebukhosini kanye nesonto laso elihlangene, noma I-Almazán, ngefa layo elikhulu lamaRoma.
Futhi abanye abaziwa kangako njenge I-Yanguas, nayo enenqaba enkulu; URello, ibekwe edwaleni le-limestone, noma IMonteagudo de las Vicarías, okuthi, lapho inqaba ingekho, inezimbili: ekaLa Raya nePalacio de la Recompensa. Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa izimangaliso zemvelo ezifana UVuesa, etholakala phansi kwesiqongo se-Urbión neLaguna Negra edumile.
Sengiphetha, sikutshele ngezindawo ezinhlanu kuphi ukuya eholidini eSpain. Kepha ukunotha nokwehluka kwezwe lethu kukhulu kakhulu ukuthi singakunika okuningi okuningi. Isibonelo, okuyigugu I-Costa Brava, ukuvakasha kwe- Amadolobha aseCadiz (lapha unayo i-athikili ekhuluma ngabo), idolobha elikhulu kakhulu le- Burgos noma i IGalician Rías Altas namaBajas. Awucabangi ukuthi yizindawo ezinhle?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindawo zokuvakasha » Ungaya kuphi eholidini eSpain?